Kubaya kuburikidza | Martech Zone
Mugovera, Gunyana 29, 2012 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
NeChishanu, takava nenguva yakanaka pamwe nechikwata kune vedu tekinoroji vanotsigira,Formstack , tichikurukura nezvebhizimusi software diki uye kukura kwavo uye kubudirira muindasitiri. Imwe hurukuro yakanyatsorova tambo neni uye yaive kutaura kuburikidzaFormstack '' Kuberekwazve.
Kupa imwe mamiriro,Formstack yakatanga kuvhurwa saFormspring. Apo timu payakaona kukurumidza kwavo chishandiso kuva mukukumbira mibvunzo, ivo vakavhura chishandiso chete icho icho ndokuchitumidza zita Mbeu, ndokudzorerazve chishandiso chavo chepakutanga Formstack. Formspring akaendesa dzimbahwe ravo kuSilicon Valley uyeFormstack akaramba ari muIndipolis.
Seshamwari yaAde nekambani yake, ndinotenda ini ndakatotaura kunetsekana kwangu maererano neshanduko uye kuti ingakanganisa sei kutsvaga. Asi shanduko yakaitwa,Formstack a yakasimba yekumaka yekutenda kuchikwata chiri KA + A, uye iro rinoshamisa vhoriyamu revashandisi veFormspring vakafara… sezvakaita Formspring uyo akabatana nevatungamiriri venhau vevezvenhau muSilicon Valley. Chokwadi ndechekuti, kunyangwe zvairwadza, chinhu chakanakisa ichoFormstack chaingova chibhakera kuburikidza neruzha, kushoropodza uye kuenderera mberi nekushandira vatengi vavo.
Pakupedzisira, zvakashanda zvakanaka… kana zvisina kukwana.Formstack inoramba ichikura uye ichienderera nekuramba ichikurumidza uye ichigadzira - kuvhura a Dropbox kusangana mumazuva mashoma anotevera anozoputika kukura kwavo!
Ini handizive kune zvemukati zvekukurukurirana zvakaitika paFormstack panguva iyoyo, asi ndine chokwadi kuti kwaive neimwe mayhem… pamwe nemuedzo wekudzokera kumashure pane sarudzo. Sezvo ini ndichishanda nemakambani anowanda uye, zvakadaro, ini ndinoona hunhu hwakajairika mumakambani akabudirira. Ivo kubaya nepakati.
Icho chokwadi ndechekuti dzimwe nguva ruzhinji haruna chokwadi. Uye kazhinji yenguva, vatsoropodzi vanenge vakatadza zvachose. Blogger, vatapi venhau nevamwe vatsoropodzi vanyori uye kazhinji havana bhizinesi rakabudirira ravo pachavo kuti vakwanise kuita mazano ekuti kambani inofanirwa kushanda sei. Pandakatanga DK New Media, Ndakatarisa nekuteerera kune wese munhu uye bhizinesi rangu rakanga rave kuda kupera nekukurumidza sekutanga kwaro.
Paive pandakazotanga kutaura nevanhu vaive nerekodhi yekukura mumabhizimusi akabudirira ndipo pandakatanga kutevera chiono changu cheicho bhizinesi rangu rinofanira kuve iro bhizinesi rangu rakabudirira. Misangano naChris Baggott, Kristian Andersen, Matt Nettleton, Harry Howe, David Castor, Todd Boyman, Adam Small, Doug Theis naMichael Cloran vakandipa kurudziro yekurova. Ini ndakachinja bhizinesi rangu zvakanyanya, ndakarasikirwa neshamwari yakanaka pamusoro payo, uye ndikateerera kugunun'una mudunhu kufanotaura kufa kwangu.
Asi ndakabaya chibhakera.
DK New Media sebhizinesi repamutemo rakangopfuura makore maviri uye isu tave nevashandi vatanhatu venguva yakazara uye muunganidzwa wevatengi. Isu takangosaina Roche pasirese, tikapedzisa yedu yekutanga yemamwe mapurojekiti eVMware, uye tine vatengi vakavimbika zvisingaite seAngie's Chinyorwa, Zmags, Mindjet, TinderBox, Delivra, Right On Interactive uye nezvimwe. Tine vamwe vatengi vakadzoka mushure mekubudirira kuita ... saChaCha, Webtrends, uye VA Loan Captain.
Isu tinobaya nepakati.
Chikwata chedu chidiki uye chakasiyana, asi isu tinonamira uye tese tine hukasha pakuwana mhedzisiro. Jenn chikamu chakakosha chechikwata chedu chinochengeta zvese zvinofamba, Stefano anodhonza vese-husiku uye zvishamiso, Marty itsime rekutsvaga uye rinonetsa vatengi vedu, Nikhil ane hanya kusinganzwisisike, uye Natani mugadziri wedombo-nyeredzi uyo uve zita muindasitiri rimwe zuva. Yedu yese timu ine chinhu chimwe chakafanana - tinobaya nepakati. Isu hatiteerere kune eduayers, isu tiri kuronga nzira yedu pachedu. Sangano redu rakafanana nemamwe uye rinotovhiringidza vamwe vedu vatengi sezvo vasina kumbobvira vashanda nekambani yakafanana neyedu.
Mira kuteerera kune veruzhinji uye ronga nzira yako wega. Vanhu vachakuudza kuti haugone kuita zvinhu zvaunogona. Mhinduro yevatengi pane zvigadzirwa nemasevhisi zvinobatsira mutengi… asi zvinogona kunge zvisina kufarira kambani yako. Vamwe vatengi vanozokuvadza kambani yako uye iwe unofanirwa kudzidza kuti ungavabvisa sei. Vazhinji vanhu vanosarudza nzira yakachengeteka, kwete iyo ine njodzi nzira.
evanhu vezvenhau anogona kunge ari iye anonyanyisa kukurudzira kumakambani… iro boka revanhu harina kungwara zvizere, groupthink ndiyo yepakati - kwete iyo yega. Kana iwe uchida kubudirira, unofanira kurega kutevera uye unofanira kutanga kutungamira.
B2B Yemagariro Ekushambadzira
Sep 29, 2012 na4: 34 PM
Kutenda nekugovana iyi Doug. Inonyatsosangana neni uye chidzidzo chikuru kunyangwe saizi rekambani yaunoshandira. Makorokoto pagore rekuyeuchidza maviri zvakare!
Sep 29, 2012 na4: 40 PM
Thanks @jaschakaykaswolff: disqus! Pasina kupokana re: bhizinesi razvino uye kushambadzira kunochinja kuri kuitika neMindjet - handina mubvunzo newe pachigaro icho iwe chauchabaya uye isu tichaenderera nekumanikidza kusingaperi kuti tikubatsire kuzviita. Zvakare, ndinokutendai nekuva kukurudzira uye kutendeseka mudiwa. Iwe watibatsira kutisundira munzira dzatinoda kuenda uye wave chinhu chakakura mukuenderera kwedu kukura uye kubudirira.
Sep 30, 2012 na12: 12 PM
Doug, ndatenda nekuve nesu uye nekutenda nekutevera. Ndinogona kukuvimbisai kuti pakanga paine "mayhem" mumazuva iwayo. Zvinoshamisa kuti kuve neapp yakasimba, vatengi vanotyisa, uye hukuru hutungamiriri, zvinogona kukubatsira iwe kuwana simba rekusundira kuburikidza. Ndakanakidzwa nekukuona uchikura DK New Media uye hauna kana kamwechete kupokana zvinhu zvaunogona kuita. Iwe uri murume mumwe chete achipwanya vashandi vega, uye ikozvino zvauine timu ini handitarisiri chero chinhu asi chakanakira imi vakomana. Makorokoto nekusunda nekukudza bhizinesi rako.